The Secret of True Life / Oromifiya by MediaServe - Issuu
Jireenyaaf deebii ni barbaaddaa?
JIREENYA Waa’ee waa tokkoo hin dhiphatin; kanaa mannaa waa’ee waaan hundumaa Waaqayyoon kadhadhu. Waan barbaadduu mara Waaqayyootti himadhu, kan inni siif godheef immoo isa galateeffadhu. Kana booda nagaa Waaqayyoo argatta, kun immoo hubannaa keenyaan oli. Yommuu ati Yasuus kiristoos keessa jiraattu garaa keetii fi sammuu kee ni to’ata. Filiphisiyus 4:6-7
JIREENYA Attamittan nagaa sirrii argadhaa?
Jireenya kee bara baraa mirkaneeffattee?
Ba’aaa ulfaataa jala jirataa?
Attamittan nagaa sirrii argadhaa?
JIREENYA DHUGAA Baâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;aaa ulfaataa jala jirataa?
A kka Uumaan karoorsetti jireenya jiraachuu Kan ati uumamte jireenya gammachuu fi guutuu akka jiraattuuf. Kitaabeen xiqqoon kun jireenya Uumaan siif karoorse akka ati jiraachuu dandeessuuf si gargaarti. Kitaabettiin Kitaaba addunyaa irraattii hedduu beekame, Kitaaba Qulqulluu keessaa fudhatti. Namoonnii miliyoonaan lakkaawwaman gaaffiilee fi rakkoolee jireenyaa isa gadi fagootiif deebii argachuuf jecha gara Kitaaba qulqulluutti deebi’anii fuula isaa galagachaniiru. Jalqabaa hanga xumuraatti kitaabeen kun waa’ee Waaqayyoo dubbatti — Waaqayyo isa addunyaa, fi dhiiraa fi dubartii bifa ofii isaatti kaayyoodhaaf uume. Kanaaf maaltu bade? Kitaabeen kun attamitti akka ati Waaqayyo hundaa danda’uu wajjin walitti dhufeenya jireenya haaraa qabaachuu dandeessu siif ibsiti. 2
W “B Si
Am qa be bi isa ak
Ka “K ak ni ga qi be irr irr
Eg isa ba ga la je
Waaqayyo Ol Aanaan waaqaa fi lafa uume
Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume. Waaqayyo, “Bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan! Simbirri, allaattiinis bantii waaqaa jala lafa irra haa balali’an!” jedhe. Ammas Waaqayyo, “Lafti, waan lubbuu qabaatee jiraatu akka gosa isaatti, beelada, wanta munyuuqu, bineensa lafaas akka gosa isaaniitti haa baasu!” jedhe; innis akkasuma in ta’e.
ADDUNYAA WAAQAYYO UUME
Kana booddee Waaqayyo, “Kottaa! Akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama ni tolchinaa! Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali’an irratti, beelada irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan!” jedhe.
Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume; dhiiraa fi dhalaa isaan uume; Waaqayyo isaaniin, “Horaa, baay’adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa! Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balali’an irratti, uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa!” jedhee isaan in eebbise. Seera Umamaa 1:1, 20, 24, 26-28 3
Abbaa Nama Jaallatuudha
“Ani abbaa isiniif nan ta’a, isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu’ jedha gooftaan inni hundumaa danda’u.” 2 Corinthians 6:18
bo ke in ka
N hu go itt
Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo kadhate dhagaa kennaafii ree? 10 Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo kadhate,
bofa kennaafii ree! Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii, ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaggaarii kenna! Maatiwoos 7:9-11
Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira; innis abbaa,isa waan hundumaa uume, isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira; innis Yesus Kristos, isa wanti hundumtuu ittiin uumame, isa nuyi ittiin jiraannus. 1 Qorontoos 8:6 5
Haala Nama gaddisiisun,
namni Waaqayyotti dugda gate Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa badnee turre, dhuunfaa dhuunfaattis karaa offii keenyaa irra sokkine. Isaayyaas 53:6
G am jir
O je ga go
DAANDII WAAQAYYOO a ich Fiigofii koo
Gowwoonni garaa isaaniitti, “Waaqayyo hin jiru” ni jedhu; isaan amalli isaanii manca’aa dha, hammina ciiggaasisaa hojjechaa jiru, namni waan gaarii godhu tokko illee hin jiru. Ogeessonni Waaqayyoon barbaadan, yoo jiraatan arguudhaaf jedhee, Waaqayyo ilmaan namootaa gad ni ilaala, dugda itti gataniiru, hundinuus wal ga’anii manca’aniiru; namni gaarii godhu tokko illee hin jiru, lakkii, tokko iyyuu hin jiru. Faarsaa 53:1-3
Waaqyyo isa guddaa kana karaa ilma isaa
Yasuus Kiristoos beekuu dandeessa
Kristos bifi Waaqayyoo inni ijaan hin argamne kan ittiin namatti mulâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;atuu dha; uumama hundumaa duras dhalate. Wanti samii keessa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taaâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;anii fi warri mootummaa qaban, warri samii keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaatamanis isatu tolche; wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame.
W fid m ye
Ifn isa hu bo
u ti ,
Waaqayyo tokkicha qofaatu jira akksumas Araarsaa tokkicha Waaqayyo tokkicha, inni gidduu dhaabatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus/ araarsus tokkicha, inni immoo Kristoos Yasuus isa nama ta’ee mul’atee dha. Inni furii namoota maraaf ofii isaa dabarsee kenne, kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. 1 Ximootiwoos 2:5-6
Ifni ulfina Waaqayyoo isa irraa in calaqqisa, Waaqayyo akkuma jirutti isaan in mul’ata; dubbii isaa isa humna-qabeessaanis waan uumame hundumaa in baata. Inni cubbuuttii qulleeffamuu erga argachiisee booddee, ol gubbaa mirga isa surra-qabeessaa dhaqee in taa’e. Ibroota 1:3
Namni ilmicha ganu abbichaa wajjin firooma hin qabu; ilmicha amanachuu isaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjinis firooma qaba. 1 Yohannis 2:23 9
Gooftaan Yasuus Oduu Gammachiisaa
N ak kit itt du
In m na dh is ba la
iyyeeyyiidhaaf, hidhamtootaaf, hacuucamtootaa fi dhukkubsatootaaf Waaqayyo, Yasuus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan muudee humnaan akka isa guute, inni naanna’ee hojii gaarii akka hojjete, Seexanaan kan hacuucaman akka fayyise, Waaqayyo isaa wajjin akka tures beekamaa dha. Hojii Ergamootaa 10:38 10
Ki er ke
Naazireet, lafa itti guddate dhufee, guyyaa Sanbataattis akkuma amaleeffate mana sagadaa isaanii dhaqee, kitaaba dubbisuudhaafis ka’e. Kitaaba raajicha Isaayaas itti kenninaan kitaaba maramaa sanas diigee kutaa dubbiin kanatti fufee jiru itti barreeffame argatee dubbises.
Inni, “Hafuurri gooftichaa ana irra jira, sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na muudeera; warra booji’amanitti akka gad dhiifaman labsuudhaaf; warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf; warra hacuucaman luba baasuudhaaf; waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera” kan jedhu ture. Kitaabichas maree, isa mana sagadaa sana keessa ergamutti kennee taa’e; warri mana sagadaa sana keessa turan hundinuus ija isaanii isa irratti irraanfatan Luqaas 4:16-20
Fayyisuuf Humna qaba Galgala sana erga aduun lixxee bood dee, warra dhukkubsatan, warra hafuura hamaadhaan qabamanis hundumaa gara isaatti fidan. Namoonni ganda sanaa hundumtuu balbala duratti walitti qabaman. Yesus dhukkubsatoota baay’ee warra dbukkuba garaa garaatiin rakkachaa turan fayyisee, hafuurota hamootas baay’ee baase; hafuuronni hamoonni isa waan beekaniif, inni dubbachuu isaan dhowwe.  Mark 1:32-34
Du di bi fix w isa yo dh
Ye na ga
Ye ila so ish ke ta
Dubartiin waggaa kudha lamaaf dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay’ee dhiphattee, waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe; kanuma ta’ee iyyuu, itti caale malee itti hin wayyine. Isheen waa’ee Yasuus yommuu dhageesse, namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa tuqxe. Isheen, “Uffatuma Yesus yoon tuqe illee nan fayya” jettee amantee turte. Yerosuma dhiigi ishee dhangala’uu dhiise; dhukkuba isheettiis akka fayyite itti dhaga’ame. Yesus yeroodhuma sana humni fayyisu isa keessaa akka ba’e beekee, namoota gidduudhaa garagalee, “Eenyutu’ uffata koo tuqe?” jedhee gaafate. Bartoonni isaa immoo, “Akka namoonni si dhiiban utuma argituu, ‘Eenyutu na tuqe?’ jettee gaafattaa?” jedhaniin. Yesus garuu amma iyyuu nama isa tuqe arguudhaaf naannoo isaa ilaale. Kana irratti dubartitiiin waan isheedhaaf godhame hubattee, sodaachaa fi hoollataa dhuftee miilla Yesus jalatti lafa dhoofte; dhugaa ishee hundumaas isatti himte. Yesus immoo, ‘Yaa intala ko, amantiin kee si fayyiseera, nagaadhaan dhaqi, dhukkuba keettiis kan fayyite ta’i!” isheedhaan jedhe. Maarqos 5:25-34
hafuurota hamaa irratti haboo qaba
Yasuusii fi bartoonni Isaa mandara Qifirnaahom dhaqan; inni immoo guyyaa Sanbataatti mana sagadaatti galee barsiise. Garaan warra isa dhaga’aniis barsiisa isaatti gammade; Yasuus akka barsiisota seeraatti utuu hin ta’in, akka nama aboo qabuutti isaan in barsiisa ture. Namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa isaaniii keessa ture iyyuu, si’uma sana caraanee, “Yaa Yesus nama Naazireet, dhimma keenya keessa maaltu si buuse? Silaa nu balleessuu yaaddee dhuftee? Anoo eenyu akka ati taate si beeka, yaa qulqulluu Waaqayyoo!” jedhe. Yesus garuu, “Gab jedhi, keessaa ba’is!” jedhee hafuuricha hamaa ifate. Hafuurri hamaan sun namicha qabatee ture sana wixxifachiisee, sagalee guddaadhaan iyyee, keessaa ba’e. Isaan hundinuu na’anii, dinqifataniis” “Maal wanti akkasii? Barsiisa, haaraa aboo of keessaa qabu! inni hafuurota hamoota iyyuu in abbooma; isaanis isaaf in abboomamu” jedbanii walitti dudubbatan. Maarqos 1:21-27
uumama irratti aboo qaba
Gaaf tokko Yesus bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee, “Kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa” isaaniin jedhe; achumaanis bishaanicha irra bu’an. Utuu bidiruudhaan ce’aa jiranii, Yesus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gad bubbisaa dhufe; bidiruu isaaniittis bishaan itti guutuu jalqabnaan, jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesusitti dhi’aatanii, dammaqsanii, “Barsiisa, barsiisa, ka’i nutoo dhumuuf” jedhan. Achumaan dammaqee, qilleensichaa fi dha’aa bishaanichaa, isa hunkuramaa ture sana, ifate; qilleensichii fi dha’aan bishaanichaa dhaabannaan, gabiin guddaan isaa ta’e. Kana booddee inni bartoota isaatiin, “Meerree amantiin keessan?” jedhe; isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan, “Namni kun eenyu? Innoo qilleensaa fi bishaan in abbooma; isaanis isaafin abboomamu” waliin jedhan. Luqaas 8:22-25
cubbuu cubu dhiisuuf  haboo qaba ATTAMITTI INNI KANA G ODHA?
Ku fid na sa bu
Ye “N Ba ku da
Ye ke je dh Ac sir
Si W hu na
Kunoos jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko laasha’e sireedhaan fidan; ol galchaniis Yesus dura kaa’uu yaalan. Garuu baay’ina namootaatiif karaa dhabnaan, mana yaabsisan; bantii mana [biyya sanaa isa diriiraa] saaqanii, akkuma siree irra ciisetti Yesus duratti gad buusan. Yesus amantii jarreen kanaa yommuu arge isa dhukkubsataadhaan, “Namicha nana, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera” jedhe. Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni, “Eenyu namichi Waaqayyoon arrabsu kun? Waaqayyo irraa kan hafe eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda’a?” jedhanii guungumuu eegalan. Yesus yaada isaanii beekee, gaaffii isaan gaafate; “Maaliif kana garaa keessanitti yaaddu? Kamtu salphaa dha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka’iitii adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa!” jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko laasha’een, “Sittan hima, ka’iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali!” jedheen. Si’uma sana utuuma isaan ilaalanii, ka’ee siree isaa fudhatee, Waaqayyoof galata dhi’eessaa mana isaatti gale. Yommus hundumti isaanii abjuu ta’anii, Waaqayyoof galata dhi’eessan; naasuunis isaan qabate, “Har’a dinqii takkaa hin ta’in argine” jedhan. Luqaas 5:18-26
Namni ana hin beekne attamitti na jaallata? … ana isa cubbama … cubbuu koof du’ee, qooda koo moo?
Gooftaan Yasuus kan dhufeef
cubbuu Keenyaaf Du’uuf Waaqayyo garuu, utuma nuyi cubbamoota taanee jirruu, Kristos nuuf du’uu isaatiin hammam akka nu jaallate argisiisa. Roomaa 5:8
Namoota yakka hojjetan lamas immoo ajjeesuudhaaf isaa wajjin geessan. Iddoo “Lafee mataa” jedhamu yommuu ga’an, achitti Yesusin fannisan; yakkitoota sanas, isa tokko mirga isaatti isa kaanis bitaa isaatti fannisan. Luqaas 23:32-33
Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf, inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba’e; madaa’uu isaatiin isin in fayyifamtan. 1 Pheexiroos 2:24
Kristos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee, yeroo hundumaaf akka ta’utti al tokkicha, cubbuu namoota baay’eetiif dhiphateera; inni qajeelaan foon uffatee, qooda warra jal’ootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifameera. 1 Pheexiroos 3:18 21
Gooftaan Yasuus har’a
du’a mo’ee jiraataa jira
Guyyaa jalqaba torbaniitti, (gaafa Dilbataa) subii/ obboroo, dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan, fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanis, garagalfamee argatan. Awwaalicha keessa ogguu seenan garuu, reeffa gooftaa Yesus hin arganne. Waa’ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii, kunoo, tasa namoonni lama wayyaa caccalaqqisaa uffatanii isaan cina dhaabatan.
Dubartoonni baay’ee sodaatanii lafa ilaalan; namoonni sun immoo, “Isa jiraataa maaliif warra du’an keessa barbaaddu? Innoo as hin jiru, ka’eera; Galiilaa utuu jiruu waan inni isinitti himee ture yaadadhaa! ‘Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf, fannifamuuf, guyyaa sadaffaattis du’aa ka’uuf jira’ jedhe” ittiin jedhan. Luqaas 24:1-7
Hundumaa irra caalaa waanan ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera; innis barreeffamni qulqullaa’oon akka jedhanitti, Kristos cubbuu keenyaaf du’eera; inni awwaalameera, barreeffamni qulqullaa’oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du’aa kaafameera. Inni Phexrosittj mul’ate, ergasii bartoota kudha lamaan keessaa warra hafanitti mul’ate . Kana booddee immoo si’a tokko obboloota dhibba shan caalanitti mul’ate; isaan keessaa kaan illee du’aniiru garri caalan garuu amma iyyuu jiru. 1 Qorontoos 15:3-6
Gooftaan Yasuus Sababa Cubbuu Keenyaaf
Sadarkaa Ulfina Waaqayyoo
Hundinuu badii dalaganiiru, ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir’ateeraa. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesus Kristos tola isaaniif kennameen, qajeelota in ta’u. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du’uudhaan warra isatti amananiif mi’a araaraa haa ta’uuf, Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta’e mul’isuudhaaf kana godhe; obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan dhiiseeraaf.. Roomaa 3:23-25
Yesus deebisee, “Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta’e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu.” Yohaannis 14:6
Sadarkaa Waaqayyoo guutuu hin dandeessu yaalii ofii keetiinis isa gammachiisuu hin dandessu; kanaafii furii Yasuus si barbaachisa Daandiin gara Waaqayyootti geessu Yasuus qofaadha.
Kiristoos keessa yootaane qofa sadarkaa Waaqayyoo guutuu dandeenya Sadarkaa Ulfina Waaqayyoo
Dubbiin, “Kristos Yesus cubbammoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe” jedhu, amanamaa dha; guutummaatti fudhatamuunis in ta’aaf; warra cubbamootatti lakkaa’aman sana keessaa immoo ani isa duraa ti. Haa ta’u iyyuu malee, Yesus Kristos ana isa cubbuutti isa duraa ta’e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul’isutti, warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta’uuf, ani araara argadheera. 1 Ximootiwoos 1:15-16
Fayyinnis Yesus Kristos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokko illee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan nuuf ta’u, waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne” jedhe. Hojii Ergamootaa 4:12
Gooftaa Yasuus keessaan
jireenya bara baraa argachuu ni dandeessa
Ye ak in be
Gatiin nama badii dalaguu duâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;a; kennaan Waaqayyoo inni Kristos Yesus gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraa ti. Roomaa 6:23
Waaqayyo Harkaa Fayyina Tola Fudhadhu
Waaqayyo, biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa kenneef; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti! Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti, biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Yohaannis 3:16-17 26
H W isa
Fa Ak hi an W Am Am
Yasuusiif Jireenya keessatti Bakka Kenni
Kunoo, ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga’ee balala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa, isaa wajjinis nan nyaadha, innis anaa wajjin ni nyaata. Mul’ata 3:20
Akka Yasuus Siif Du’e Amani
Yesus gooftaa akka ta’e afaan keetiin yoo beeksifte, waaqayyo du’aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta’a, afaan isaatiinis beeksisee in fayya. Roomaa 10:9-10
Akka Mucaa Waaqayyoo Taate Amani Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta’aniif aboo isaaniif kenne; isaanis warra maqaa isaatti amananii dha. Yohaannis 1:12
Ammuma Yasuusitti Amanuu Dandeessa
Garaa kee irraa akkas jedhii kadhadhu:
Fannoo irratti waan anaaf duuteef galatoomi Yasuus. Akka ani ofii kootiin madaallii kee guutuu hin dandeenye ykn of fayyisuu hin dandeenye nan beeka. Ani sin barbaada, Yasuus. Cubbuu koo anaaf dhiisi. Na fayyisi! Amma ofii koo sittin kenna. Waan na jaallattee fi na simatteef galatoomi. Amma waan mucaa Waaqayyoo na taasifteef galatoomi! Ameen. 27
rakkina keessatti siif yaada. Akka injifattuufis si gargaara
Kadhannaa fuula 27 irra jiru yoo kadhatteetta ta’e, cubbuun kee siif dhiifameera. Ati amma mucaa Waaqayyooti! Hafuurri Waaqayyoo, Hafuurri Waaqayyoo, si keessa jiraata. Duuka buutuu gooftaa Yasuus si taasise — jireenya kee guyyuu keessatti si jajjabeessa, si gaggeessas. “Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu, gara dhugaatti isin in geessa.” Yohaannis 16:13
Hafuurri qulqulluun jaalala Waaqayyo siif qabu si yaadachiisa. Yeroo rakkoon si mudatu ati qofaa kee miti; akka si jajjabeessuuf Waaqayyo waan abdachiise hundumaa siif kenna, ogummaa fi ijajabina. Hangi tokko immoo kunooti:
Egaa ani sii wajjin waanan jiruuf hin sodaatin!
Ani Waaqayyo kee ti, hin na’in! Ani sin jabeessa, ani sin gargaaras; irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Isaayaas 41:10
Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyan, inni rakkina isaanii hundumaa keessaas isaan in baasa. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhi’oo dha, warra yaadni isaanii caccabee bullaa’es in fayyisa. Faarsaa 34. 17 - 18 28
In ke fid ga sa ca in fa
Fir ga ak ak W fid
Ye am hu je
Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya of irra in kaa’e, muddama keenyas in baate; nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha’icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebisettis in lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame; nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa’uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Isaayaas 53:4-5
Yesus itti fufee, “Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan, ba’aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa; ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa, ana irraas baraa; anoo garraamii dha kanan gad of deebises; boqonnaas lubbuu keessaniif in argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu, ba’aan namni anaaf jedhee baatus salphaa dha” jedhe. Maatiwoos 11:28-30
Yeroo du’atti dhihaattu
Firoota ko! Abdii waan qabdaniif hin gaddinaa, waa’ee warra du’aniif abdii jiru akka beektan in barbaanna. Yesus du’ee du’aa akka ka’e erga amannee akkasuma immoo Waaqayyo warra du’an karaa Yesus, isumaa wajjinis deebisee akka fidu in amanna. 1 Tasilonqee 4:13-14 Yesus garuu, “Du’aa ka’uu fi jireenyi ana; namni anatti amanu yoo du’e iyyuu in jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du’u; kana amantaa ree?” jedheen. Yohaannis 11:25-26 29
Yeroo nagummaan sitti hin dhaga’amne
Waaqayyo gara keenya erga ta’ee, eenyutu nu irratti ka’a ree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee, waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuu ree? Roomaa 8:31-32
Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga’u akka ol isin qabutti, harka isaa isa aangoqabeessa jalatti gad of deebisaa! Inni isiniif waan yaaduuf, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa! 1 Peter 5:6-7
Yeroo Horiif Rakkattu
Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kristos Yesus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta’uuf! Ameen. Filphi 4:19
Yoo aartan akka cubbuu hin hojjenne! Utuu aartanii aduun isinitt hin dhihin! Efesoon 4:26
W dh na ar cu W Isa
er im ha sa
W gu ye am
Abboommii koo hundumaa eeguu isaan barsiisaa! Ani immoo hanga dhuma baraatti guyyaa mara isinii wajjin nan jira” isaaniin jedhe. Maatiwoos 28:20 30
Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari’ataman eebbifamoo dha; Mootummaan Waaqaa kan isaaniitii. Yommuu namoonni anaaf jedhanii isin arrabsan, yommuu isin ari’atanii fi yommuu isin irratti dharaan waan hamaa cufa dubbatan isin eebbifamoo dha. Gatiin keessani Waaqa irratti guddaa waan ta’eef gammadaa; ililchaas. Isaan raajota isin dura turanis akkanuma ari’ataniiru.
Yeroo haqi dhabamu
Waa’ee abdii qabdaniitiif, nama isin gaafateef deebii ga’u deebisuudhaaf yeroo hundumaa Haqa qophaa’oo ta’aa! Deebiin keessanis garalaafinaan dhabuu nama kabajuudhaanis haa ta’u! Warri maqaa keessan balleessan, amala keessan isa gaarii, isa erga kan Kristoos taatanii argisiiftan sana arganii akka yeella’aniif, isiniin immo yaadni garaa keessanii akka isin hin ceephaanetti jiraadhaa! Isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa, jaalala Waaqayyoo taanaan, sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. 1 Peexiroos 3:15-17
Yeroo sodaan sitti dhaga’amu
Waaqayyo isa garaan isaa cimsee isa amanatu nagaa guutuudhaan in eega; Waaqayyo gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta’eef, bara baraan isa amanadhaa! Isaayaas 26:3-4
Yeroo yakki sitti dhaga’amu
Kottaa mee walii wajjin dhugaa in baafnaa, cubbuun keessan akka dhiigaa yoo isin diimesse iyyuu, akka cabbii in addaattu; diimaa biluus yoo isin godhe iyyuu, akka jirbii iddamaa adii in taatu. Isaayaas 1:18 Yakka
Yeroo obsa dhabdu Waaqayyo duratti gab jedhi, obsaanis isa eeggadhu, nama karaa isaa wal qixxeeffatetti, nama wanta hamaa koratee fiixaan baafatettis hin aarin!  Faarsaa 37:7
Luqqisiin hangi tokko Caaffata Qullaa’aa Kitaaba Qulqulluu, Macaafa Qulququlluu Afaan Oromoo Hiikaa Haaraa irraa fudhatame. Kaan immoo akka ifuuf jecha fooyyeffameera.
Copyright © 2015 FL Media Mirgi hundinuu eegamaadha Printed in India for MediaServe, 2015 www.mediaserve.org
Yaa Waaqayyo abbaa koo jedhee akkan si waamuuf waan na dandeessifteef sin galateeffadha. Akka Yasuus dhufee anaaf du’udhaan cubbuu koottii bilisa na baasu waan gooteef barbaraan sin galteeffadha. Waan na jaallattuu fi naaf yaadduuf galatoomi. Rakkinni xiqqoon ati arguu dadhabdu hin jiru, rakkinni guddaan ati furuu dadhabudus hin jiru. Abdii dinqisiisaa Kitaaba qulqulluu keessatti anaaf kenniteef galatoomi. Akka Hafuurri Qulqulluun yeroo hundumaa anaa wajjin ta’u sin kadhadha, jireenya koo guyyuutti akka ana gaggeessuuf. Sitti amanachuu koo keessaan gammachuu fi nagaa anaaf dhufeef sin galateeffadha. Ameen.
Fakkiin asi irraa alfred luther
Yoo waa’ee Kitaaba Qulqulluu fi Waaqayyoo akkasumas karoora inni siif qabus caalchiftee beekuu feeteef, unka armaan gadii kana guutiitii teessoo kanaan ergi:
Waa’ee Kitaaba Qulqulluu fi karoora Waaqayyo anaaf qabu beekuu nan fedha.
4	Filannoo koo armaan gadiitti mallattoo kana kaa’eera: Barumsa fageenyaa Kitaaba Qulqulluutti galmaa’uun fedha. Ani laphee koo Yasuusiif baneera, akka namini biraan dhufee waa’ee isaa caalaatti natti himu nan fedha. Kakuu Haaraa isa qaama Kitaaba Qulqulluu tahee fi isa eerri baay’een irraa waraabamee kitaabee kana keessa seene tola argachuu nan fedha. Maqaa fi teessoo koo (QUBEE GURGUDDAADHAAN) nan barreessa: Maqaa:
The Secret of True Life / Oromifiya